Umculi u-Abbey - Ifulethi leSitudiyo esizimele
Sitholakala enkabeni yedolobha endaweni emgwaqeni omkhulu ekuhambeni kwedolobha kanye nesifunda saseHot Springs. Kepha i-Apartment ifakwe ngemuva futhi iyindawo ethule efana neyokubalekela enezindawo zokuhlala ezilula, ngaphandle kokupaka emgwaqweni kanye nompheme wengadi omuhle kanye nendawo engaphandle.
Ukudla okuphekwe ekhaya namaphakheji okwamukela akhethekile, angase atholakale, buza ukuthi uyathanda yini.
Isakhiwo sethu esikhulu sinezingxenye ezintathu, ngasinye sineminyango yaso. Okokuqala, ngendlela yokungena ku-Date Street, iyigalari engu-2000 sq. ft. Isitudiyo esisebenzayo, esibizwa nge-"Artist Abbey". Okwesibili ikhaya lomndeni wethu, elinomnyango walo ku-1st Ave. Okwesithathu, i-Artist Abbey Guest Space, efinyelelwa ngendlela yasengadini esuka ku-1st Ave, ukusuka endaweni yokupaka ezimele futhi inomnyango wayo wangasese.
Igalari Yeciko i-Abbey izoba nemicimbi yobuciko nomculo ngobusuku be-T noma C, "Art Hop" unyaka wonke, ngoMgqibelo wesibili wenyanga ngayinye kusukela ngo-6:00pm-9:00pm. Igalari izophinde isingathe imicimbi yobuciko yomphakathi ekhethekile, futhi izovulwa ngamahora athile ebhizinisi. Sithemba ukuthi uzodlula!
-I-Artist Abbey Studio Apartment isakazwa amahora angama-24 phakathi kwesivakashi ngasinye.
- Ukuhlanza okungeziwe nokuhlanza
-Sicela ushiye amawindi nomnyango uvuliwe uma uphuma
-Ukuxhumana kwangaphandle nabasingathi, ukuqhelelana okungu-6' ngamamaski
Sisendaweni emaphakathi, kodwa sisenomuzwa wengadi onokuthula. Wamukelekile ukuthi uphumule engadini lapha noma uhambe edolobheni. Bona ingxenye ethi "Ukuzulazula" ukuze uthole zonke izinto ongazenza endaweni!
Sihlala kule ndawo futhi sitholakala ngocingo.
Zizwe ukhululekile ukusivakashela ku-Artist Abbey Gallery, noma ungangibona ngichelela ingadi!